Shan wiil oo walaalo ah oo uu hoobiye haleelay iyaga oo hurda
Shan wiil oo walaalo ah oo jiifay guriyooda ayaa gantaal ku dhacay waxa uu dilay saddex ka mid ah halka labada kalana ay dhaawacmeen oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka wayn ee magaalada Baledweyne.
Seynisyahannada ka shallaayay hubka wax gumaada ee dunida ay u sameeyeen
"Dhaqtar-dhaqameedkii ii sheegay inuu iga daweeyay HIV"
Horuma weyn ayaa laga sameeyay daweynta , ka hortagga iyo fahamka HIV, balse wararka been abuurka ha ayaa weli dhaawac u heysta dadka la nool xanuunkan.
Xiddigga kooxda Arsenal Gabriel Magalhaes ayaa dagaal la galay nin isku dayay inuu dhac u geysto gaarigiisa oo yaallay meel gawaarida lagu xareeyo.
Safiya Tusmo maxay ka tiri 120-ka geel ee lagu wareejiyay?
Safiya Yoonis (Tusmo) oo dhowaan qabsatay baraha bulshada, kaddib markii lagu mehriyay 120 neef oo geel ah, ayaa saakay lagu wareejiyay geela.
Sidee loo xushaa loona tababaraa sirdoonka Israa'iil?
Waxaan halkan idinkugu faafaahinaynaa sida hay'adda sirdoonka ee dalka yar ee Israa'iil ay u noqotay mid aad u awood badan oo ay la tartanto dalal aad u awood badan.
Magaalada Lalibela oo caan ku ah kaniisadaha dhagxaanta gudahooda laga dhisay ayaa bishii Ogosto waxaa la wareegtay fallaagada TPLF balse shalay ayay ciidamada dowladda dib u qabsadeen.
Tel Aviv ayaa loo magacaabay in ay tahay magaalada ugu qaalisan aduunka in lagu noolaado.
1 Disembar 2021
Dhageyso, “Doorashada waxaa u sharraxan saraakiil ciidan loomana baahna inay is casilaan”, Muddada 4,41
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya ayaa sheegay in hal maalin loogu daray musharraxiinta doonaya inay isu diiwaangaliyaan kuraasta tartankooda la shaaciyay ee maamullada qaar.
22 Nofembar 2021
Dhageyso, Filsan aabeheed oo BBC uga warramay xiridda Nabad TV, Muddada 3,39
Maamulaha Talefishinka Nabad ee albaabada ay isugu laabeen maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa sheegay in markii horaba ula-booc ah loogu tukubayay.
Muuqaal, Daawo: Wareysi guuddoomiyaha Ahlu Sunna Waljameeca, Muddada 28,31
Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo uu BBC-da siiyay guuddoomiyaha Ahlu Sunna Waljameeca Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo uu kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay ee Galmudug
8 Nofembar 2021
"Ninka keliya ee dadka soo saara waa aniga xisbiga keliya ee lagu soo aflaxana waa kayga"
Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in maalinta xisbiya siyaasadeed oo dheeraad la aasaaso ay tahay dhimashada Somaliland.
Dhageyso, Gabdho Soomaali ah oo sannadkasta xusa dilkii Qadaafi, Muddada 4,49
Dilkii Qadaafi ayaa 10 sano laga joogaa.
Dhageyso, Maalinta caalamiga ah ee Dumarka Miyiga: Kaalinta haweenka reer-guuraaga ah, Muddada 4,41
Maanta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee haweenka reer guuraaga ah, ujeedaduna waxay tahay in la aqoonsado doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin nolosha miyiga.
Sarkaalka sare ee ka tirsanaa C.I.A-da Mareykanka ayaa ku dhaawacmay weerarka fashilmay, hase ahaatee waxa uu 17 maalmood kaddib ku geeriyooday isbitaal ku yaalla Jarmalka.
Maxaad ka taqaanaa Carawaleeda Shiinaha soo martay?
Ching Xi ayaa weydiisatay dowladda fasax ay ku guursato wiilkeeda ay korsatay, ee Zhang Bao.
Qoys uu u dhashay ilmo aan koodii ahayn iyo sida ay ku dhacday !
Lammaanaha kala ah Daphna iyo Alexander Cardinale ayaa sheegay in ay u dhalatay gabadh aanan iyaga meelnaba uga ekeyn.
Shantan cunno waxay halis ku yihiin caafimaadkaaga
Waxa laga yaabaa in ay u muuqato in aanay waxba ka jabnayn in la cuno qaar ka mid ah cuntooyinka.
6 Nofembar 2021
Dumarka uurka leh, uur kale ma yeelan karaan?
Inkastoo ay aad u yar tahay in haween ay hal mar labo uur yeelato isku mar, amaba ay uur qaaddo iyadoo uur leh, ayaa khubarradu waxay eegayaan saddex arrimood oo bayolojiga la xiriira oo adkeyneysa inay taasi dhacdo.
Shaqada diyaaradaha Dronis-ka ee xildhibaan Sakariye ee ay sirdoonka Soomaaliya qabteen
Dowladda Mareykanka ayaa horey dalkeeda uga mabnuucday 800 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee DJI sababo dhanka ammaanka ah
7 Nofembar 2021
Sidee ayay Shabaabka iyo ururada kale u adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn?
Weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee dhawaan lagu qaaday guriga rai'sul wasaaraha Ciraaq ayaa waxaa uu keenay dood ku saabsan halista arrintan.
Maxay yihiin diyaaradaha Drones-ka ee uu leeyahay xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi ee ay sirdoonka Soomaaliya qabteen?
Duleel badda dhexdeeda lagu arkay oo hadda la ogaaday wuxuu yahay
Qof isticmaala baraha bulshada ayaa bishii hore arkay khariidad god madow oo ku taal bartamaha badweynta Baasifiga, taasoo dhalisay muran, iyadoo fikrado kala duwan ay dadka ka dhiibteen godkaas.
Listen Next, Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 3 Disembar 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 2 Disembar 2021, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 2 Disembar 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 2 Disembar 2021, Muddada 29,00
Masrax laga heeso illaa Masaajid laga Aadaammo iyo maalmihii Abwaan Maki Xaaji Banaadir
Magaalada Hamtramck oo ka tirsan gobolka Michigan mar waxay ahaan jirtay dhulka ay qoondo ahaanta u leeyihiin dadka kasoo jeeda Poland balse hadda waa magaalada kaliya ee ku taalla Mareyknaka ee dowladda dhisan xubnaheeda oo dhan ay muslimiin yihiin.
Waxay sidoo kale mamnuuceen in Soomaaliya laga iibiyo ama loo daabulo walxaha qarxa ee lagu farsameeyo qarxyada ay Al-Shabaab adeegsato.
Tababar ku saabsanaa qaabka uu qofku xaas labaad ku guursan karo ayaa laga joojiyey dalka Sacuudiga kaddib marki ay baraha bulshada ka dhalisay muran iyo cara xoggan.
Shilkan ku dhacay Anne ayaa saameeyey nolosheeda oo dhan.